घडेरी मिचेर प्लटिङ - GharGhaderi.com
घडेरी मिचेर प्लटिङ
पोखरा : घडेरी किन्दाको बैंकको ऋण निखनिसकेपछि मान्छेको सपना के हुन्छ ? घर बनाउने । स्याङ्जा अर्जुनचौपारीकी गोमा अर्यालको सपना पनि त्योभन्दा बेसी थिएन । उनले सकिनसकी बैंकको किस्ता बुझाएकी थिइन् ।
सामान्य सरकारी जागिरको बचत, श्रीमान्ले विदेशबाट पठाएको पैसा जम्मा गर्दै बैंकलाई किस्ता बुझाउँथिन् । त्यसो गरी–गरी १२ वर्षमा ऋण निखनेर सकियो । १२ वर्षमा खोलो त फर्किन्छ भन्छन् । यही सोचेर ऋणको भारीबाट मुक्त भएकी उनी सुखका दिन फर्किएको अनुभूति गर्दै थिइन् । तर, त्यो सुखद अनुभूति धेरै टिक्न पाएन । जब उनी जग्गा बैंकबाट फुकुवा गर्न भनी मालपोत पुगिन्, झल्याँसै भइन् । जग्गा त उनको नामबाट सार्वजनिक भइसकेको रहेछ ।
गोमाले पोखरा–१४ हवेली मार्गमा १३ हात मोहोडा र ४२ हात पछाड भएको घडेरी २०६५ सालमा किनेकी थिइन् । भन्छिन्, ‘लालपुर्जा छ, नक्सा पनि छ । केही नहोला भनेर ढुक्क भएर बसेकी थिएँ ।’ घडेरीमा कम्पाउन्ड वाल पनि लगाएर बारबन्देज गरेकै थिइन् ।
श्रीमान् विदेश थिए । घरमा साना केटाकेटी छन् । उनी पोखरा आइरहन भ्याउँथिनन् । तर, छिमेकको जग्गा किनेर एकजनाले उनको घडेरीको पर्खाल मात्रै भत्काएन छन्, बाटै बनाइदिएछन् । पोखरा–१४ का वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्कीका अनुसार गोमाको घडेरीलाई बाटो बनाएर अर्जुन बस्याल नामका जग्गा दलालले प्लटिङ गरेका हुन् । बस्याल १६ वटा घडेरी बेचीवरि सम्पर्कविहीन छन् । ती १६ घडेरीमध्ये एउटामा घर बनिसकेको छ । बस्यालले फसाएका ती १६ घडेरीवालालाई पनि के थाहा कि उनले बाटो भनेको जमिन गोमाको निजी घडेरी हो !
निजी घडेरी कसरी सार्वजनिक भयो त ? गोमाले मालपोत र नापी कार्यालयमा गएर पनि बुझिन् । त्यहाँका कर्मचारीले सजिलै भनिदिए, ‘हाल साविक गर्दा ।’ हुन पनि प्लटिङवालाले जमिन हालसाविकका बेला गोमाको घडेरीको कम्पाउन्ड वाल भत्काएर बाटो बनाई प्रयोग गरिदिएछन् । तर, गोमालाई त्यत्ति जवाफले चित्तबुझ्ने कुरै भएन । नापीका कर्मचारीले फोन गरेको तर सम्पर्क नभएको भन्दै टार्न खोजे । गोमालाई भने नापीबाट फोन आएको थाहै छैन । भन्छिन्, ‘फोन गरेका थियौं भन्नुहुन्छ, मलाई कहिल्यै फोन आएन । फोन गरेर लागेन भने पनि अर्काका जग्गालाई बाटो बनाइदिन त भएन नि ।’
गोमाले हालै वडाध्यक्ष र स्थानीयको भेला पनि डाकिन् । सबैले भने, ‘घडेरी त गोमाकै हो ।’ उनीहरूले कित्ता नम्बर ५५८८ को घडेरी गोमा अर्यालको भएको भन्दै उनकै नाममा गरिदिन नापी र मालपोतलाई चिठी पनि लेखेका छन् । वडाध्यक्ष कार्कीले पनि त्यही सिफारिस गरेका छन् । उनले गत साल फागुनमै हाल साविकका लागि उक्त कित्ता नम्बरको जमिन अर्यालको भएको भन्दै सिफारिस गरेका थिए । गोमाले बैंक किस्ता मात्रै नभई घडेरीको तिरो बर्सेनि तिर्दै आएकी पनि थिइन् ।
वडाध्यक्ष कार्की प्लटिङ गर्ने व्यवसायी अर्जुन बस्याल बदमास भएको बताउँछन् । स्वयं कार्की आफू पनि उनीबाट ठगिएको सुनाउँछन् । भएछ के भने, कार्कीको जग्गा प्लटिङ गर्दा पनि बस्यालले अर्कैको जमिनलाई बाटो बनाइदिएछन् । ‘मेरो जग्गा अगाडिको घडेरी किनेर प्लटिङ गर्छु भनेका थिए, त्यो जग्गा किने होलान् भनेको त १ लाखमा बैनापट्टा मात्रै गरेको रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यत्तिका भरमा बाटो बनाएर पछाडिको जग्गा प्लटिङ गर्न लागेछ ।’ आफूलाई पनि उसले २० लाख रुपैयाँ ठगेको कार्कीले सुनाए । भन्छन्, ‘कहिले म्याग्दी छु भन्छ, कहिले दमौली छु भन्छ, भेट्नै सकिन्न ।’
Source link : Annapurna Post